Manatontosa Fikarohana Ara-pitsaboana Ao Afrika: Fahafahana & Hevi-diso · Global Voices teny Malagasy
Manatontosa Fikarohana Ara-pitsaboana Ao Afrika: Fahafahana & Hevi-diso
Voadika ny 13 Oktobra 2017 6:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, Italiano, عربي, 繁體中文, Ελληνικά, Português, Deutsch, 日本語, नेपाली, English
Ranjit Warrier tamin'ny taona 2016 tao Zambia, nahazoana alalana avy aminy ny sary.
Matetika zara raha voatatitry ny fampahalalam-baovao ny fikarohana ara-pitsaboana atao any Afrika, kanefa sehatra iray mandroso izay manasongadina ny filàna maika indrindra ao amin'ny kaontinanta.
Misy antony roa no mahatonga ny fangatahana fikarohana ara-pitsaboana eto an-toerana: Voalohany indrindra, ny fahasalamana maneran-tany amin'izao fotoana izao dia tsy manana karazana fanafody sy vakisiny ilaina hiatrehana ny olana ara-pahasalamana manokana ao amin'ny kaontinanta Afrikana. Ny aretina toy ny SIDA, ny raboka sy ny tazomoka dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ireo firenena mahantra indrindra eto Afrika ary olana goavana ny tsy fisian'ny fampiasam-bola amin'ny vokatra ho an'ireo aretina ireo avy amin'ny orinasa mpanao fanafody.
Faharoa, ny fikarohana ataon'ny mpahay siansa Afrikana dia natao hampandrosoana ny fahaiza-mikaroka ao Afrika sy ny anjara andraikitra tsy mitsaha-mitombo ho an'ny siansa ary mitondra tombontsoa ihany ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena ao amin'ny kaontinanta ny teknolojia.
Dr. Ranjit Warrier no talen'ny Foiben'ny Laboratoara ao amin'ny Foiben'ny Fikarohana momba ny Areti-mifindra ao Zambia (CIDRZ). Lehibe tao Lusaka, Zambia tamin'ny taona 1990 izy, tamin'ny fotoana nanombohan'ny valanaretina SIDA nisy fiantraikany teo amin'ny fahasalamana ao amin'ny firenena. Niala tao Zambia izy mba hanohy fianarana ambony tany Etazonia any Louisiana, avy eo Indiana. Nitarika ny fikarohany manokana momba ny viriosy VIH izy amin'ny maha mpianatra “post-doctoral” azy tao amin'ny Oniversiten'i Pennsylvania, alohan'ny nanapahany hevitra hody an-tanindrazana mba hanatsarana ny fitsaboana ao Zambia. Niresaka momba ny hoavin'ny fikarohana ara-pitsaboana any Zambia sy ny zavatra mety disoin'ny fampahalalam-baovao momba izany fikarohana izany any Afrika miaraka amin'i Dr. Warrier ny Global Voices. [Fanamarihana: miresaka amin'ny maha-olona manokana azy Dr. Warrier]:
Global Voices (GV): Inona no lohahevitry ny fikarohana ataonao?
Ranjit Warrier RW: Manao asa fanatanterahana be dia be aho amin'izao fotoana izao, manohana ny fandaharan'asam-pirenena Zambiana miaraka amin'ny andrana amin'ny Laboratoara. Vao avy nanomboka fandaharan'asam-pikarohana momba ny fampandrosoana ny Fizahana môlekiolan'nyVIH, TB, sy ireo mitondra aretina hafa mahaliana aho.
GV: Inona no heverinao fa lohahevitra malaza na mafana momba ny siansa ao amin'ny firenenao sy Afrika amin'ny ankapobeny? Inona no maha samihafa azy amin'ireo firenena Tandrefana?
RW: Tsy misy ny Fikarohana&Fampandrosoana fototra. Fa fametrahana vahaolana naroso tany an-kafa tany izany rehetra izany. Tsy maintsy miova izany, raha tsy izany dia ho mpandray foana isika fa tsy mpamorona. Ny vahaolana voaray dia tsy voatery ho tonga lafatra foana ho an'ny tontolo iainantsika ary matetika sarotra tanterahana ny fampiasana azy araka ny tokony ho izy eto amintsika.
GV: Avy aiza ny famatsiam-bola sy ny fanohanana? Ampy ve? Sarotra ve sa mora ny mitady mpahay siansa sahaza?
RW: Etazonia sy Eoropa. Samihafa ny famatsiam-bola ho an'ireo tetikasa isan-karazany. Sarotra ny mitady olona hiverina hody na hifindra eto, satria tsara kokoa ny famatsiam-bola sy ny fitomboan'ny fitadiavan-dalana any amin'ny firenen-kafa.
GV: Manao ahoana ny fotodrafitrasam-pikarohana? Inona no sakana amin'ny asa fikarohana mahazatra ataonao mbola tsy sendra anao tany taloha?
RW: Tsy mitovy amin'ny fenitry ny firenena mandroso ny fotodrafitrasa fototra ary mandany vola be ny fahazoana herinaratra, rano sy aterineto tsy tapaka. Lafo be ny fitaovana ary mila volana maro vao tonga any amin'ny firenen-kafa ny fitaovana afarana.
GV: Inona ny hevitry ny vahoaka mikasika ny siansa sy ny siantifika aty Afrika?
RW: Misy ny fahalianana, saingy fahatakarana tena voafetra mikasika ny fomba siantifika. Manolo-kevitra aho mba hampianarina any an-tsekoly ny fisainana tia mitsikera sy ny fomba siantifika mba hanatsarana ny toe-javatra.
GV: Araka ny hevitrao, inona no otrikarena amin'ny fikarohana ara-tsiantifika aty Afrika, aiza no tokony hifantohany sy ny fomba ahafahantsika manampy amin'ny fampandrosoana azy?
Misy ny otrikarena mahatalanjona. Nahita mpianatra tsy mampino avy amin'ny sokajin-taona rehetra aho. Ilaina ny fanabeazana ara-tsiansa manomboka amin'ny sokajin-taona rehetra. Hitondra tombontsoa goavana ny siansa sosialy, ny siansa momba ny solosaina, ny tahiry lehibe, ny fitrandrahana ny sehatra ivelany, ny fitsaboana (ny areti-mifindra sy ny aretina tsy mifindra) ary ny fitsaboana nentim-paharazana.
GV: Azonao faritana ve ny voka-dratsy sy ny tombontsoa amin'ny fiainana maha-mpahay siansa ao Afrika raha oharina amin'ny firenena tandrefana, raha ny zava-niainanao no jerena?
RW: Voalohany indrindra, tena fanamby goavana eto ny hafainganana rehefa manao zavatra sy ny fahazoana fahaiza-manao. Mametra ny habetsaky ny vaovao sy ny hafainganan'ny fikarohana azo atao ny rafitra misy amin'ny gazety izay tsy maintsy mametraka ny lahatsoratra amin'ny sehatra handoavam-bola.